RAHARAHA DOANIN’I MAHAJANGA : Tsy manaiky hanaovana ny Fanompoambe ny taranaky ny Ampanjaka
Raha mbola i Hasindrazana Edoaurd fahatelo no mitantanana ny Doany Miarinarivo ao Mahajanga dia tsy hanaiky ny hisian’ny fanompoambe ny taranaky ny Ampanjaka avy ao Betsioka Ambato-Boeny ny Razan’olo ary ny Saha Mpanompo. 13 avril 2018
Anisany antony tsy anekena intsony an’i Hasindrazana Edouard dia « noho izy nampiady ny Zanaka Ampanjaka hisara-bazana, teo ihany koa ny fanimbazimbana ny fomban-drazana ary ny fananganana Ampanjaka antsokosoko tsy ara-pomban-drazana nanomoka ny taona 2008 », hoy ireo Ampanjaka avy ao Betsioka. Izany hoe miisa efatra hatramin’izay nitondrany ny Mpanjaka izay nitondra sy nifandimby teo. Araka ny fomban-drazana anefa dia tsy tokony hisolo ny Ampanjaka fa tokony ho folaka vao hisy solony.
Tamin’ny taona 2008 dia efa nisy ny didy navoakan’ny fitondrana tao Mahajanga mikasika ity raharaha ity ny hanajanonana an’i Hasindrazana Edouard tsy ho fahatelo intsony. Ny 2006 nisy ny taratasy nataon’ny Ampanjaka Amina, Mpanjakan’ i Marambitsy ny amin’ny fanalana azy amin’ny toerany io raha ny voalazan’ izy ireo hatrany. Amin’ity taona 2018 dia nitsangana ny Mpanjaka Betsioka, ny Razan’olo ary ny Saha Mpanompo amin’ny fanesorana ny fahatelo eo amin’ny toerany.
Ny 23 avrily ho avy izao dia hanomboka ny Mikipa izany hoe « fanadiovana ny manodidina ny Doany » mialohan’ny fanompoa. Ny daty faha 30 avrily ny fanompoan-pandrama na ny “toa mainty” izany hoe fanadiovana ny fandrama ka misy fomba atao mialohan’ny hirosoana amin’ny fanompoambe. Nanamafy araka izany ireo izay tsy mankasitraka ny fisian’i Hasindrazana Edouard fahatelo fa raha mbola eo ity farany raha ny voalaza dia “tsy hisy fomba ho vita na ho tanteraka eo.” Olana mateti-piseho ny tranga mampifanolana eo amin’ireo samy mpanompo rehefa fotoana alohan’ny fanompoambe ao Mahajanga ka mampisavorovoro ho an’ireo vahoaka tonga mangata-pitahiana ao izany.